सार्वजनिक « Janata Samachar
काठमाडौं । कवि अमर रोकाद्वारा रचित ‘अक्षर बनिदिए भावहरु’ कविता तथा गीत संग्रह सार्वजनिक भएको छ । शनिबार जुम प्रविधिमार्फत गीत संग्रह सार्वजनिक गरिएको हो । सिसार साहित्य प्रतिष्ठानले जुम
विकेल शाहीको ‘एक्लो प्रेमी’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नवगायक विकेल शाहीको पहिलो गीत ‘एक्लो प्रेमी’ सार्वजनिक भएको छ । लामो समयदेखि संगीत साधनामा रहेका शाहीको याे पहिलो गीत सार्वजनिक भएको हो । शब्द, संगीत तथा स्वर
नेपाल स्रष्टा समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ज्ञानु अधिकारी तथा नवराज तिमिल्सिनाले कथा संग्रह ग्याब्रियलेका बारेमा समालोचकीय मन्तव्य राखेका थिए।
सतहत्तरौं बर्षमा सतहत्तरौं कृति विमोचन
काठमाडौं । साहित्यकार मोहनबहादुर कायस्थको ‘पारि किनारबाट वारि म’ कृति सार्वजनिक भएको छ । शनिबार बालुवाटारमा अन्तर्राष्ट्रिय समाजको कार्यक्रम ‘स्रस्टा र सिर्जना’मा पुस्तक विमोचन गरिएको हो । १ सय ३
‘अफगानी रणमैदान’ सार्वजनिक
काठमाडौं । साहित्यकार केदार संकेतको नवनीतम् कृति ‘अफगानी रणमैदान’ सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी साहित्यकार रोचक घिमिरे, समीक्षक प्रा.डा. गोविन्दराज भट्टराई, प्रा.डा. कुमार कोइराला, नेत्र
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ सार्वजनिक हुनुभएकाे छ। नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) नवलपुरको दलदलेबाट आज बिहान उहाँ सार्वजनिक हुनुभएकाे हाे । ०७५ फागुन २८ मा सरकारले चन्द नेतृत्वको
एजेन्सी । मंगलग्रहको रंगीन तस्बिर पहिलोपटक सार्वजनिक भएकाे छ । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको मंगल ग्रहमा केहि दिन अगाडि पुगेको यन्त्रमानव ‘पर्सिवरेन्स मार्स रोवर’ले ट्वीट मार्फत आफू आई पुगेको नयाँ ठाउँमा
बलात्कारीलाई सार्वजनिक गर्न माग
आँखामा कालो पट्टी लगाएर युवतीहरुले महिला सुरक्षा, अपराधीलाई कारवाही र पीडीतलाई न्याय दिन माग गरिरहेका थिए ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । केहीबेरअघि सम्पन्न बोर्ड बैठकको निर्णयपछि नतिजा सार्वजनिक गरिएकाे हो । नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र नेपाल टेलिकमको
‘वर्षा र सहकालका देवता’ रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथारोहण